नेवाः समुदायलाई गाली गलौज किन ? — Bhaktapurpost.com
नेवाः समुदायलाई गाली गलौज किन ?
महेश्वर मानन्धर १९ भदाैं, २०७७
१९ भदाैं, २०७७
हिजो ललितपुरमा भएको रथ जात्रा झडप पछि विभिन्न व्यक्तिहरूले नेवाः समुदायलाई गाली गलौजका शब्दवाणहरू प्रयोग गरिएको देखियो । यो नेवाः भावना माथि गरिएको जातीय हिंसा नै हो । यस्ता निन्दनीय कार्यको घोर बिरोध गरौं ।
जब सडक विस्तारको नाममा नेवाःहरूको घर भत्काउन थाल्यो, सो कार्यको बिरूद्धमा नेवाःहरू सडक आन्दोलनमा आए पछि नै हो, यस प्रकारका अधिक मात्रा नेवाः बिरूध्दमा गाली गलौजका शब्दहरू प्रयोग गर्न थालिएको । राज्यले यसरी फुक्यो कि नेवाःहरू अतिक्रमणकारी, सरकारबाट मुअब्जा बुझेर पनि ठाउँ नछाड्ने अटेरी, विकास बिरोधि, सरकारको काममा साथ नदिने आदि ईत्यादी । यसरी फुकेपछि हो न हो, नेवाःहरू यस्तै हुन्छन् भन्ने अरू जातीका मान्छे र उपत्यका बाहिर बस्ने सबैले यस्तै सोच बनाए ।
देश विकासको नाममा जति पनि योजना परियोजनाहरू ल्याए, ती पनि काठमाडौंमा नै केन्द्रीकृत हुने खालको ल्याएर यहाँका नेवाःहरूलाई चिढाउने र आन्दोलन गरे बदनाम गर्ने कुचेष्टा गरियो ।
#खोना को घाउ आलै छ । जो जो यस आन्दोलनमा सरिक भए तिनका बिरूद्ध नेवाः होस् वा गैर-नेवाः, सबै अरिङ्गाल जसरी खनिए । गाली गर्नेहरूको कमी थिएन । विकास बिरोधि नै भने, मुअब्जा बुझेर ठाउँ नछाड्ने पनि भने । केही मिडियाहरूले सकारात्मक समाचार संप्रेषण गरेपछि भने अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो र सरकार पछि हट्यो ।
पछिल्लो समयमा जहाँ जे जसरी आन्दोलन भए नेवाःहरूको मात्रै भईरहेको छ । सरकार आफै नेवाःहरूलाई समुल नष्ट गर्न खोजिएको भान हुन थालेको छ भने गैर-नेवाःहरू नेवाःहरूको भावनामा ठेस पुग्ने गरि गाली गलौजमा उत्रिई जातीय हिंसा गर्न उक्साई रहेको देखिन्छ । अबका नेवाः युवाहरू यस प्रकारको हिंसा सहनेखालका छैनन् । जगजाहेर छ, नेवाःहरूको मनाेरञ्जनात्मक आन्दोलन हुने गर्दछ ।
नेवाःहरूको जस्तो मनोरञ्जनात्मक आन्दोलन विश्वमा सायदै होला । जति नै शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनिएपनि झडप हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । आन्दोलनमा जाने भनेपछि ठाउँ अनुसार लाठो बोक्ने, सांकेतिक ब्यानर , टायर बाल्ने, पेट्रोलका पोका बोक्ने, नग्नता प्रदर्शन गर्ने लगायत सांकेतिक रूपमा अन्य कार्य गर्ने गर्दछन् । हामी नेवाः मात्रै हौं, जस्तोसुकै आन्दोलनमा पनि धिमे र झ्याली पिट्दै, तालमा नाच्दै मनाेरञ्जनात्मक आन्दोलन गर्छौं ।
अन्ततः आन्दोलन, आन्दोलन नै हो । जसको कुनै रूप र बाटो हुन्न । जस्तोसुकै रूप लिन सक्छ । यस्तो कार्य गर्न हुन्नथ्यो, यस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने हुँदैन । जित्न कै लागि लडिरहने छन् । त्यसैले सरकार र राज्यका तत् निकायहरूमा आसिन महोदयहरूले आफ्पनो क्षमता देखाउन सक्नु पर्छ । दुबै पक्षबाट भएका यस्ता निन्दनीय हर्कतलाई समय मै समाधान गर्न सक्नु पर्छ । नत्र, बिकराल रूप लिन समय लाग्दैन ।
(मानन्धर सम्पदा अभियन्ता हुन् ।)